သတင်း - PVC ပိုက်များအတွက် သန့်ရှင်းရေးသုံးနည်းလမ်း
မည်သည့်ပိုက်အမျိုးအစားကိုမဆို အချိန်အကြာကြီး သန့်စင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး PVC ပိုက်လည်း ပါပါသည်။ဒါကြောင့် လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးကို ပိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းတွေ ရရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
1. ဓာတုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း- PVC ပိုက်များကို ဓာတုဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပိုက်များ၏အစွန်းနှစ်ဖက်မှ ဓာတုသန့်စင်ရေးစက်ဝန်းများအတွက် ယာယီပိုက်များနှင့် လည်ပတ်နေသော ပန့်စင်များနှင့်အတူ ပိုက်များကို ယာယီအသွင်ပြောင်းရန်အတွက် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
2. PIG pigging- PIG pigging နည်းပညာကို ပန့်ဖြင့် မောင်းနှင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော အရည်သည် PIG (ဝက်) ကို ပိုက်ကို ရှေ့သို့ တွန်းပို့ကာ ရည်ရွယ်ချက်ကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် ပိုက်ထဲမှ PVC ပိုက်အတွင်း စုပုံနေသော အညစ်အကြေးများကို စွန့်ပစ်ရန်၊ သန့်ရှင်းရေး။
3. ဖိအားမြင့်ရေသန့်စင်ခြင်း- 50Mpa အထက် ဖိအားမြင့်ရေဂျက်လေယာဉ်ကို အသုံးပြု၍ ဖိအားမြင့်ရေဂျက်သန့်စင်ရန်အတွက် PVC ပိုက်၏မျက်နှာပြင်ရှိ ဖုန်များကို ဖယ်ရှားပါ။ဤနည်းပညာကို အကွာအဝေး ပိုက်လိုင်းများအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ပိုက်လိုင်း၏ အချင်းသည် 50 စင်တီမီတာထက် ကြီးရမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်များသည် ယနေ့ခေတ် PVC ပိုက်များဆိုင်ရာ ဗဟုသုတမျှဝေခြင်းဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအသိပညာကို ကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရန်အတော်လေးရိုးရှင်းသော်လည်း ထုတ်ကုန်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Longxin Mold သည် PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှို၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ Longxin Mold သည် ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုနည်းပညာ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကတိပြုထားပြီး၊ စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ် အံဝင်ခွင်ကျမှိုကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးအတွေ့အကြုံရှိပါသည်။ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပိုက်မှိုပေးသွင်းသူအား ရှာဖွေနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
အဓိကစကားလုံးများ- PVC ပိုက်;PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း;PVC ပိုက် Fitting Mold
တင်ချိန်- နိုဝင်ဘာ ၃၀-၂၀၂၁